Western Union Ads | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Classifieds, Personal Ad. » Western Union Ads
Posted by kai on Mar 19, 2013 in Classifieds, Personal Ad. | 15 comments
ဘေးက 200px x 400 px လေးအတွက်.. ကြော်ငြာခရပါတယ်..။
ဆိုတော့… အမေရိကားမှ မြန်မာသို့ငွေလွှဲနိုင်ပါပြီ..။
သာမန်အားဖြင့် ကျုပ်မြန်မာပြည်ကိုလွှဲရင်.. ဟွန်ဒီက.. ဒေါ်လာ၁၀၀ကို ၃ဒေါ်လာ ဆားဗစ်ခယူပါတယ်..
အခု Western Union ကတော့.. ၁ဒေါ်လာကနေ..၅၀၀အထိ.. ၁၁ဒေါ်လာလောက်ယူတာမို့.. ၁၀၀လွှဲယင်မကိုက်ပေမယ့်.. ဒေါ်လာများရင်ကိုက်ပါတယ်..။
ရန်ကုန်မှာ ငွေလဲနှုန်းက.. ဘယ်ဈေးပေးသလဲတော့မသိ..
အရှေ့ကျွန်းကနေလည်း ရနေပြီ ကြားတယ်ခည ..
ခက်စ်တာက ကျုပ်ကတောသားဆိုတော့ … ရုံးချိန်ကလည်းတောက်လျောက်
ရုံးတက်နေ.. ရုံးပိတ်ရက်ကျတော့လည်း ဇနပုဒ်က စာတိုက်ဘဏ်က ပိတ်ထားတော့
အလုပ်ကမဖြစ်.. ဘယ်ကနေဘယ်လိုလွှဲရသလဲ ဆိုတာလေးတော့
ကိုယ်တိုင်လည်း သိချင်သား ..(ကိုယ်မေးရမယ့်လူတွေကလည်း ဘွတူချင်းတွေ)
ဆိုတော့ သူမသာ ကိုယ်အသုဘ ချည်း များတာကလား..။
တိုကီယိုက အခြားသော ရွှေများကလည်း မလွှဲနဲ့ ငါယူမယ် ဆိုပြီး
ကားသွင်းနေသူတွေများတာကတကြောင်းမို့ …သိသူရှိရင် ပြောပြကြပါအုံးဗျို့ …။
P.S လွှဲစရာပိုက်ဆံတော့ မချိပါ … reverse အနေနဲ့ အိမ်က ပြန်မှာ ချင်ရို့..။
ဒီက KBZ ဘဏ်ခွဲတစ်ခုမှာ အဲဒီလိုဂိုလေး တွေ့လိုက်ရတယ်။
ငါတို့ရွာမှာ ကြေငြာထားတာဆိုပြီး ကြွားရသေးတယ်။ :hee:
KBZ နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုရင်…
KBZ Branch တိုင်းမှာ လွှဲလို့ရနိုင်သလား။
ဒါမှမဟုတ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Branch မှာပဲ ရတာလား မသိဘူး။
မြန်မာပြည်ကနေ နိုင်ငံခြားကို.. WU နဲ့ငွေလွှဲလို့မရဘူးလို့သိထားပါတယ်..
ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ပါကြောင်းနဲ့ စင်္ကာပူ..ဘန်ကောက်..စသဖြင့်လွှဲဖူးသူတွေရှိရင်.. ပြောပြစေလို… :hee:
ဘန်ကောက်ကိုလွှဲလို့ရပါတယ် . . .
ပြန်ဝင်လာတာနဲ့.. တန်ဖိုးရှိတဲ့သတင်းဗျာ..။ ကျေးဇူး.. ဇူးမမလေးရေ..။
ခုက.. Moneygram ပါကြော်ငြာလာထည့်နေတော့.. အဲဒီဟာကလည်း.. ဘယ်လိုလည်းသိချင်တာ..။
စကာင်္ပူလည်းရတယ်ကိုင်းရဲ့ . . .
ပို့တဲ့သူဘက်က ပို့မယ့်သူရဲ့ မှတ်ပုံတင် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်တွေလိုမယ်ထင်တယ် . . .
ဒီဘက်ကတော့ ကုဒ်နံပါတ်နဲ့ ပိုက်ဆံအတိအကျသိရင်ရပြီ . . .
စမ်းလွှဲကြည့်လိုက်လေ . . . မလေး သွားထုတ်လိုက်မယ်
တနလာင်္နေ့ ကျ ပြန်မေးပေးပါမည် ။ သိသလောက်တော့ မရသေးပါ ။
၅၀၀နဲ့အထက်ဆို ငွေလွှဲခ ဘယ်လောက်ယူလဲသိချင်ပါတယ်.. နောက်တခုက ဒီဖက်က ပြန်ထုတ်ပေးရင် ဘဏ်ရဲ့နေ့စဉ်ပေါက်ဈေးနဲ့ထုတ်ပေးလားလည်းသိချင်တယ်.. ဘဏ်မှာ မေးဖူးပေမယ့် မရေမရာအဖြေများသာရခဲ့လို့ပါ.. အပြင်ကလွှဲတာတော့ အဲဒီကဆို တရာ ၂ကျပ်ယူပါတယ်.. သများတို့လည်း အဲလိုလွှဲချင်ရင်လုပ်ပေးပါတယ်..
ကောင်းပါလေ့ ကောင်းပါလေ့ ဟွန်ဒီလွဲလိုက်တာ ပါသွားဖူးတယ်။ ပြန်တောင်းလို့လဲမရ ခုလိုလေးကျတော့ ကိုယ့်ငွေကိုယ်စိတ်ချရသပေါ့။ မှတ်သားသွားပါတယ်သဂျီးးရေ
သူကြီးရေ .. Western Union က မြန်မာနိုင်ငံမှ အခြား နိုင်ငံများသို့ ငွေပြန်လွှဲ ၍ မရသေးပါ တဲ့ ။
ဒီကနေ့ ၁၀-၃-၂၀၁၄ စက်ရပ်သတင်းပါ ။
Moneygram ကလည်း နိုင်ငံခြား ပြန်လွှဲ၍ မရပါ ။
western uninon က ငွေလဲနုန်းက လွဲသည့် နေ့မှာ တစ်ခါတည်း သတ်မှတ် ပြောပြပေးလိုက်တယ် ပြောပါသည် ။ ဥပမာ စကာင်္ပူ ကနေ လွှဲ ရင် လွှဲတဲ့သူကို ငွေလဲနုန်း ဘယ်လောက် ရမည့် မြန်မာငွေ ပမာဏ မည်မျှဆိုတာကို ပြောပြီး တစ်ခါတည်း အသိပေးလွှဲသည်ဟုပြောပါသည် ။
ကမ္ဘောဇကတော့ သူ့ဆီမှာ account ဖွင့်ထားလျှင် သူနှင့်ဆက်ထားသည့် ဘဏ်ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန် လွှဲလို့ ရသည်ပြောပါသည် ။
moneygram က မြန်မာပြည်မှာ western union လောက်တော့ မတွင်ကျယ်သေးပါ ။အချို့ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ မသိကြပါ ။ Tun Foundation Bank ကတော့ moneygram နှင့် လွှဲ လို့ ရပါသည်။